बाँकेमा एकैदिन थपिए १४ जना संक्रमित, कुल संख्या ५ सय ७ पुग्यो – Sadarline
ब्रत र शौभाग्यको महिना साउन
नेपालगञ्ज : शुक्रवार देशभरमा कोरोनाका २० जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये बाँकेका १४ जना रहेका छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाका १३ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका १ गरी बाँकेमा १४ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् ।
यस्तै कैलालीमा ३ जना, डडेल्धुराका परसुराम १० का १ जना, बैतडी शिवनाथ १ का १ जना र मोरङको रतुवामाई वडा नं. २ का १ पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले जनाएको छ ।
योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ५ सय ७ पुगेको छ । जसमध्ये ४ सय ३३ पुरुष र ७४ जना महिला रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । हालसम्म निको भएर ७० जना डिस्चार्ज भएका छन् भने मृतकको संख्या ३ पुगेको छ ।
सदरलाइनडटकम, सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यसहित १६५ जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी बिहीवार १ सय ६५ जनाको ‘नोजल स्वाब’ संकलन गरिएको थियो । जेठ ११ गते प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गरिएकोले सबै जनाको कोरोना परीक्षण गराइएको हो […]
१० भाद्र २०७३, शुक्रबार १३:३६
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १७:२४
२५ पुष २०७५, बुधबार १७:५४